DAAWO: Dhaqaalihii Kenya oo burburay & Farmaajo oo sabab u noqday.
September 15, 2020 NEWS 1
NAIROBI(P-TIMES) – Walaaca iyo welwelka soo wajahay Ganacsatada Qaadka ee dalka Kenya ayaa sii kordhaya, Xarunta Madaxtooyada ee Nairobi-na waxay wajahaysaa imtixaan siyaasadeed oo ka dhashay ficiladeedii ku wajahnaa siyaasadda Soomaaliya.
Kenya, waxay Soomaalidu ku haysataa Baddeeda, sidaas oo kalena faragalin siyaasadeed ayay ku leedahay gudaha dalka dagaalada kasoo kabanaya oo ay ka joogaan ciidamo hubeysan, waxaana horey ay Villa Soomaaliya ugu eedeysay Nairobi in ay xadgudub cad ku sameysay xeerarka diblumaasiyada ee caalamiga ah.
Markale, Todobadkan Beeraleyda Qaadka loo yaqaano Miirowga ee dalka Kenya, waxay muujiyeen in ay maalin kasta khasaarayaan lacag ka badan 150kun oo dollar taas oo ka dhigan in 10-kii maalmoodba ay waayaan aduun kor u dhaafaya 1.5malyan oo dollar.
Qaad-leyda Kenya, waxay awal heli jireen maalin kasta faa’iido ka badan mida ay hadda sheegeen in ay si maalinleh u waayaan, waxay Qaadka cagaaran geynayeen Soomaaliya oo ay lixda aroornimo ka dagayeen diyaaradahooda, taas bedelkeedana waxay soo qaadanayeen lacagta adag ee Soomalida.
Gudoomiyaha beeralayda Qaadkan ayaa afka furtay, wuxuuna hadda ka qoomamaynayaa hadalo uu horey u jeediyey oo ku wajahnaa in aysan Soomaaliya joojin Karin Qaadkan, xiligaas wuxuu si indho la’aan ah u taageeeray Qarankiisa, si ay u fushadaan danahooda ku wajahan doonista boobka Soomaaliya, gaar ahaana xiliga Dacwadda Badda oo uu xooga saarayeen in ay dhaqaalaha Maxkamadda baxshaan.
Nairobi, waxay tiro ka 4jeer Ergo diblumasiyadeed iyo ganacsato Soomali ah oo ay taageerayso u direen Muqdisho & Farmaajo, si ay uga dhaadhiciyaan in la furo duulimaadyada Qaadka, mar kastana xooga la saaro in Qaadka la fasaxo, iyadoo ay xasuusinayaan in Xukuumadda FS ay ka helayso Canshuuro wanaagsan, taas bedelkeedana ay Kenya qaadanayso lacagta adag.
Madaxweyne kuxigeenka Kenya Wilyam Ruto ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa todobaad ka hor in Madaxweyne-Farmaajaha xukuma Soomaaliya uu iska diiday hadda dalabkoda ku wajahan in Qaadka la furo, wuxuuna u sheegay ganacsatada dalkiisa in ay iska beertaan Dalagyada kale oo ay ugu horeyso Avacada.
Ruto, kama harin arrinta wuxuu gaarsiiyey in ilaa doorashada 2021-ka ay dhacayso ay Ganacsatada Kenya naawilaan in aan wax wanaagsan ka imaan doonin xagga Soomaaliya, isagoo hadalkiisa ula jeeday in ay meesha ka baxdo madaxda Xukunka haysa.
Sarkaal sare oo katirsan dhanka Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyey in ay XFS doonayso, in ay Kenya qaado dhawr talaabo oo asaasiyad u ah xariirka diblumaasiga ah.
In wax soo saarka Soomaaliya la galiyo gudaha Kenya, lana joojiyo lacagta adag ee ay kala baxayso gudaha dalka, lacagta Qaadka lagu bedelo Kalluunka oo ay dib u qaadayaan diyaaradaha Qaadka dhoofsha.
In duulimaadyada rayidka ah ee ka taga Soomaaliya aan lagu hakin Wajeer ee ay toos uga dagaan Nairobi, tanni waa qodob ku jiray heshiis horey loo gaaray.
In Basaboorka Soomaaliga uu noqdo mid lagu tagi karo Kenya, kan Shaqaalaha & Diblumaasigana Visaha dal-kugalkiisa lagu baxsho garoonka diyaaradaha.
Arimaha labada dalna looga wada hadlo Toobiyaha siyaasad labo dal lamariyo oo ay joojiso xadgudubyada Kenya ay ka wado hawada iyo dhulka Soomaliya.
Nairobi, waxay ku tahay culeys weyn in ay joojiso faraglinta gudaha ee dawlad gobaleedyada qarkood ay siiso, sidaas oo kale arrimaha cadadiska ay saartay Soomaalida waxay xooga ku saaraysaa in ay ku cadaadiso in dacwada Badda ay soo celiyaan Madaxda DFS oo lagu wada hadlo miisaska qarsoon.
Dadka u dagaalama in aan la fasixin duulimaadyada Qaadka ee Soomaaliya ayaa xoog ku saaraya madaxda Soomalida in aysan ogolaanin in duulimaadyadaas ay u dhoofaan gudaha dalka, waxayna ku boorinayaan ganacsatadu in ay wax kale ka ganacsadaan oo ay joojiyan la macaamilka Kenya.
Laakiin dadka dhaliila siyaasadda dawladda ee Qaadka ku wajahan ayaa rumeysan in kan Itoobiya uu soo galo deegaanada Xaduuda kuyaala, Kan Kenyana xagga Jubbaland iyo Xeebaha laga soo galiyo, doodaas waxa burinaya saameynta oo ka yar intii hore, ayay leeyihiin dadka la socda.
Dadka qaarkood ayaa taageersan ficilada dawladda Faderaalka ee xanibaada qaadka Kenya, waxayna ku sababeynyaan tageeradooda in ay Kenya waayayso maalin kasta Malaayiin Dollar oo ay ka qaadanaysay Soomaaliya, shacab badana ay heleen dheef wanaagsan oo ah lacagtaas oo hadda ugu yaraan hoos u dhacday in ay ka baxdo gudaha dalka.
Nabad Iyo Nolol 🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴